अष्ट्रेलियाको अन्तर्राष्ट्रिय उडान अक्टोबरदेखि सुचारु गर्ने योजना रहेको क्वान्टासको घोषणा —
१६ फाल्गुन २०७७, आईतवार ११:४४ admin	0 Comments
अष्ट्रेलिया । क्वान्टास एयरलायन्सले अष्ट्रेलियाको अन्तरराष्ट्रिय उडान सुचारु गर्ने घोषणा गरेको छ। एयरलाइन्सले आगामी अक्टोबर महिनादेखि उडान सुचारु गर्ने योजना बनाएको घोषणा गरेको हो।कोरोना महामारीले गर्दा एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडान शत प्रतिशत र आन्तरिक उडान ७० प्रतिशत गुमाउनु परेको बताएको छ। कम्पनीका सीइओ एलन जोयसले अष्ट्रेलिया लगायत देशहरुमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान संचालन भएकोले आफूहरु अहिले आशावादी रहेको बताएका छन्।
जोयसले अष्ट्रेलियाका प्रिमियरहरु तथा मन्त्रीहरुसंग कुराकानी गरेको र ती कुराकानीले आफूलाई थप आशावादी बनाएको उल्लेख गरेका छन् । उनले खोप अभियान प्रभावकारी भएमा आन्तरिक उडान छिट्टै सुचारु हुने र अक्टोबर महिनाको अन्तिम सम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारु हुने सम्भावना रहेकोले सोही अनुसार क्वान्टासले योजना बनाएको बताएका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस ! अ’ष्ट्रेलियाका नेपाली सञ्चारकर्मी टीका कार्कीको असामयिक नि’धन
सिड्नी, अष्ट्रेलिया । अ’ष्ट्रेलियामा विगत दुई दशकदेखि सक्रिय सञ्चारकर्मी टीका कार्की शनिबार मृ’त फेला परेका छन् । उनी हिमालयन रेडियोका सञ्चालक थिए । सन् २००३ देखि नेपाली भाषाको कार्यक्रममार्फत हिमालयन रेडियोले यहाँको समूदायलाई सुसूचित गर्दै आएको थियो । नजिकका आफन्तहरुले निरन्तर सम्पर्कको प्रयास गर्दा पनि सफल नभएपछि उनलाई डलविच हिलस्थित निवासमा खोज्दा अचेत अवस्थामा फेला पारेका थिए । एक्लै बस्दै आएका उनलाई सुतेकै अवस्थामा हृद’यघात भएको आशंका गरिएको छ । प्रहरीले कार्कीको शवलाई पोष्टमार्टमका लागि पठाएको छ ।
हाल उनको श’व लिडकम्बस्थित श’वगृहमा राखिएको छ ।
यसैबीच, अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली पत्रकारहरुको संस्था अष्ट्रेलियन नेप्लीज जर्नलिष्ट एशोसिएसनको आकस्मिक बैठकले स्व. कार्कीलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै एक मिनेट मौन धारणा गरेको छ ।आफ्ना सदस्यको निधनपछि बोलाइएको बैठकले शोकसन्तप्त परिवारमा धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस् भन्ने कामना समेत गरेको छ । साथै बैठकले स्व. टीका कार्कीको योगदान अष्ट्रेलियाको नेपाली समूदायमा सदैव स्मरणीय रहने जनाएको छ । एन्जाका अध्यक्ष हेमन्त काफ्लेले कार्कीको निधनले अष्ट्रेलियाका नेपाली सञ्चारकर्मीहरु आहत बनेको बताए ।
स्व. कार्कीको श्रीमती र दुई छोरा नेपालमा रहेका छन् ।
← अ’ष्ट्रेलियाका नेपाली सञ्चारकर्मी टीका कार्कीको असामयिक नि’धन
यी बलिउड स्टार रियल लाइफमा लगाउँछन् यस्तो चीज, तर मानिसहरुका अगाडी देखाउँदैनन् →
अस्ट्रेलियामा पर्वत घर भएका एक नेपालीको पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर मृ’त्यु
१५ माघ २०७७, बिहीबार ०७:४९ admin	0
९ चैत्र २०७७, सोमबार ०३:१६ admin	1
अस्ट्रेलियामा विद्यार्थी तत्काल आउन नपाउने
१३ माघ २०७७, मंगलवार ०७:५६ admin	0